Ambatovinaky: nesorina ny vatobe ahina hampidi-doza | NewsMada
15 taonina ny lanjany. Tena goavambe tokoa ilay vatobe mandondona, eny Ambatovinaky, ahina hitera-doza, indrindra amin’izao fotoan’ny orana izao. Nanomboka, afakomaly ary nitohy omaly, ny fanalana azy ity.
Tonga teny Ambatovinaky ireo ekipan’ny mpamonjy voin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), avy ao Tsaralalàna, sy ny BNGRC nanala ilay vatobe nitatao ka mety hitera-doza ho an’ireo mponina mipetraka eo amin’ny manodidina.
Marihina fa taorian’ny fitarainana nataon’ny mponina, nisy ny fandinihana sy fanadihadiana nataon’ireo manampahaizana manokana talohan’ny firosoana amin’ny fanapahan-kevitra ny hanala ny vato.
Araka ny nambaran’ireo mpamonjy voina teny an-toerana, tsy vita iray andro ny fanalana ity vatobe milanja manodidina ny 15 taonina ity. Efa voafehy tanteraka ny toe-draharaha ka tsy misy intsony ny tokony hatahorana.
Manentana hatrany ny mponina ny sampana mpamonjy voina mba samy ho mailo hatrany ary hampandre haingana raha sanatria ka misy ny tranga mety hampiahiahy hitera-doza. Amin’izao fotoam-pahavaratra izao, ahina mety hihotsaka ireo vatobe sy tany rehefa tratry ny orana sy ny hain’andro matetika.
Misy amin’ny toerana sasany ny hazo mila tapahina sy rindrimbato mitriatra na vatobe heverina hihotsaka ka ilana ireo ekipan’ny vonjy voina efa manampahaizana amin’ny fanesorana azy ireny.
Mbola nofy ratsin’ny maro ilay vatobe nipoahan’ny varatra ka nihotsaka tamin’ny tranon’olona tetsy ambonin’i Mahamasina ary nahafaty olona tamin’ny fahavaratra farany teo.